» ५३ वर्षपछि प्रविण बेड्वाल र रचना रिमालको आवाजमा ‘उनको प्रीति’
५३ वर्षपछि प्रविण बेड्वाल र रचना रिमालको आवाजमा ‘उनको प्रीति’
२९ भाद्र २०७७, सोमबार १६:३१
मकवानपुर, २९ भदौ । बहुचर्चित गीत ‘उनको प्रीति’ पून एकपटक रेकर्ड भएर सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको शब्द रहेको यो गीत वि.सं. २०२४ साल बैशाख १२ गते रचना गरिएको थियो । गीत रचना भएको ३६ वर्षपछि यो गीत पहिलो पटक वि.सं. २०६० साल मंसिर महिनामा रेकर्ड भएको थियो । यो गीतलाई सुरुमा चर्चित गायक जगदिश समाल र चर्चित गायिका सपना श्रीले गाएका थिए । उनीहरुको आवाजमा रेकर्ड भएको यो गीत रचना भएको ५३ वर्षपछि र पहिलो रेकर्ड भएको १७ वर्षपछि पून रेकर्ड गरी सार्वजनिक गरिएको छ । अहिले यो गीतलाई नेपाल आईडलबाट भाईरल बनेका नेपाल आईडल सिजन ३ का फर्स्ट रनर अप प्रविण बेड्वाल र भाईरल प्रतियोगी रचना रिमालले आवाज दिएका छन् । हेर्नुहोस् गीतको भिडियो रिपोर्ट–
‘उनको प्रीति’ बोलको यो गीत १४ सेप्टेम्बर २०२० मा रिमा ईन्टरटेन्मेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलबाट प्रिमियर भएको छ । प्रविण र रचनाको यो पहिलो डुयट गीत हो । राष्ट्रकवि घिमिरेको सम्झनामा उनकै रचनामा पस्किएको यो गीत सार्वजनिक हुनुपूर्व नै चर्चामा थियो । प्रविण र रचनाको आवाजमा रहेको यो गीतमा चर्चित संगीतकार नारायण रायमाझीको संगीत रहेको छ । बि.बि. अनुरागीको संगीत संयोजनमा तयार भएको गीतलाई श्याम श्वेत रसाईलीले मिक्सिङ गरेका छन् । गीतको भिडियोलाई मिराज अर्यालले छायाँकन तथा सम्पादन गरेका छन् । गीतमा रत्न बिकको बाँसुरी सुन्न सकिन्छ । सुन्नुहोस् यो पुरा गीत–
गीतको भिडियोमा उदिराम खड्का, बिन्दु खड्का, बिबेक खड्का, मनोज खड्का र राकेश सोनीलाई फिचरिङ गरिएको छ । उनीहरुलाई विर्मा खड्काले सिंगारेका छन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई प्रविण र रचनाको यो गीत कस्तो लाग्यो ? कृपया पुरा हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् । गीतको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा पनि राखिएको छ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।